किन बोझ ठानिए राष्ट्रनिर्माता ? « News of Nepal
किन बोझ ठानिए राष्ट्रनिर्माता ?
रकारले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा नदिँदा जनमानसमा असन्तुष्टि देखिएको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा दिवस मनाउँदै आएकाले बिदा दिनुपर्ने माग सत्तारूढ दलभित्रबाटै आएको भए पनि सरकारको बिदा नदिने अडानले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गरेका छन्। सरकारले २०६२⁄०६३ सालको जनआन्दोलनपछि पृथ्वी जयन्तीमा दिँदै आएको बिदा कटौती गर्दै सार्वजनिक बिदा नदिने निर्णय गरेको थियो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारले क्रिसमसको बिदा दिन हुन,े राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा बिदा दिन किन नहुने?’ गत वर्ष सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेरै क्रिसमसको अवसरमा इसाई समुदायलाई मात्र बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर यस वर्ष उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले क्रिमसमको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नुभएको थियो।
पूर्वमन्त्री डा. मोदनाथ प्रश्रितले राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने पृथ्वीनारायण शाहले देखाउनुभएको बाटो हिँड्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘राष्ट्रनिर्माण गर्ने व्यक्तिलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन, पृथ्वीनारायण शाहकै कारण आज मेचीदेखि महाकाली भनेर गर्व गर्न पाएका छौं’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘पृथ्वी दिवसलाई अपमान गरे देश विभाजित हुन्छ।’
सरकारले बिदा दिने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा बिदा दिन सकेन। सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुपर्ने भएकाले बिदा दिने निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो।